Masuuliyiin ka Mid ah Maamulka Kaalinka 6aad [Somaliland] oo Tabar Uga Furmayo Magaalada Harar – Rasaasa News
Oct 6, 2009 ethiopia, Kaalinka 5aad, Kaalinka 6aad
Masuuliyiin u badan wasiiro oo ka tirsan maamulka Kaalinka 6aad, ayaa maanta waxaa ay soo gaadheen magala madaxda Kaalinka 5aad ee Jijiga, masuuliyiintan oo isugu jira wasiiro, wasiiro xigeeno iyo Saraakiil Ciidan oo ka socda dhanka Kaalinka 6aad [Somalidland], ayaa waxaa magalada Jijiga ku soo dhaweeyey Duqa Magaalada Jijiga.
Waftigan oo ayaa waxay tababro ku qaadan doonaan mgaalooyinka Jijiga iyo Harar, waxayna siminaarka ku qaadan doonan arimo door ah oo ku saabsan sida looga hortago kacdoonka dadweynaha, Maaraynata siyaasadaha awooda badan ee gilgili kara maamulada, waxbarashada iyo xoogjinta xarumaha ganacsiga ee labada Kaalimood ee 5 iyo 6 [Somalidland and Somali State] oo labadooduba ka wada tirsan dhulweynaha Itobiya.
Baryahan dambe ayaa waxaa isa soo tarayey mashaariicda horumarita ee ay dawlada Itobiya ka wado Kaalinka 6aad [Somaliland], ee dhinacyada wax barashada iyada oo ay haatan ka jirto Jaamacad weyn oo hoostagta Jaamacad Addis Ababa, mahalka ay kuliyadu bixiso ayaa waxaa ka mid ah maadooyinka cilmiga, ganacsiga iyo luuqada Afka Xabshiga. Jaamacada ayaa inta ayna siinin ardayda tacliinta Jaamacda lagu barto ayaa waxay khasab kaga dhigtaa ardayda in ay qaataan casharo deg deg ah [intensive course] oo ay ku baranayaan luuqada Xabashiga. Ardayda luuqada ku wanaagsan ayaa waxaa deeq waxbarasho laga siiyaa magaalada Addis Ababa, halkaas oo kolka ay ardaydu dhamaystaan tacliinta ay si muwaadinimo ah shaqooyin uga helaan Kaalinka 5aad [Somali satate].
Dhinaca Ganacsiga waxaa jooga Kaalinka 6aad [Somaliland] gabdho shaqaale ah oo ka yimaada Kalimaha kale ee Itobiya, waxaa kale oo ku yaal Hargeysa caasimada Kaalinka 6aad Hoteelada ugu casrisan oo ay leedahay dawlada Itobiya. Horumarka iyo is dhexgalka xaga dhaqanka ah ee uu Kaalinka 6aad [Somaliland] samaynayo ayaa ah mid xawli ku socda, waxaana suurto gal ah in waa dhaw oo Kaalinka 6aad [Somaliland] uu noqon doona Kaalinka ugu horumarka weyn Kaalimada uu ka kooban yahay dalweynaha Itobiya.
Arimahaas iyo kuwo kale oo badan ayaa ka mid ah arimaha ay waftiga shalay timid Jijiga la doonayo in ay sii xoojiyaan, ka dib kolka uu u dhamaado tababarada ay ku qaadan doonaan magaalooyinka Jijiga iyo Harar. Waftiga ayaa waxaa hogaaminaya Wasiirka Arimaha Gudaha ee Kaalinka 6aad Mudane Farxaan Jaamac Ismaaciil, waxaa kale oo waftiga ka mid ah masuuliyiin ay ka mid yihiin;
1. Wasiirka Arrimaha Gudaha Farxaan Jaamac Ismaaciil
2. Kalkaaliyaha Wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Cabdi Xirsi
3. Taliyaha Ciidanka Sirdoonka maxamed Nuur
4. Taliyaha ciidanka Booliska Jen Maxamed Sogdhi Dubad
5. Abaanduulaha Ciidamada Korneel Ibraahim caydiid
6. Korneel Axmed Yuusuf Cawaale
7. Korneel Cabdiraxmaan Xaaji Axmed.
Masuuliyiintan Kaalinka 6aad [Somaliland], ayaa waxaa la dajiyey guriga martida ee Kaalinka 5aad [Somali State], waxaana inta ay Jijiga joogaan masuul ka ah Duqa magaalada Jijiga.